ဥရောပနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုရှာပါရန်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပွဲတော်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုရှာပါရန်ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးပွဲတော်များ
ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
သူတို့အားပါတီအပေါ်ဦးထုပ်နှင့် stomping ဘွတ်ဖိနပ်မှုအဖွဲ့ရရန်အချိန်! ကျနော်တို့ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးပွဲတော်များအဘို့အမြျှောအဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပေါ်မှာဆိုရင်. သငျသညျအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း party ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား နွေရာသီ? 🙋🏻
ဥရောပအကောင်းဆုံးပွဲတော်များ: Creamfields, Daresbury, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
Creamfields ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲတော်များတစ်ဦးနှင့်ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးကခုန်ဖြစ်ပါသည် ဂီတ ပွဲတော်. သင်၏ဘဏ်များ၏အများဆုံး Make အားလပ်ရက်များ သြဂုတ်လနှင့် တစ်ဦးလက်မှတ်ဘွတ်ကင် အကြီးစားပါတီရန်!
သူတို့ကအိမျတျောကိုအနုအဆင့်ရှိ, EDM, techno, စည်နှင့်ဘေ့စ, လက်ခံထားတဲ့အစွဲ, မီးဖိုချောင်, နှင့်ပိုပြီး, Creamfields အဆိုပါ go-မှပွဲတော်ကခုန်ဂီတပရိတ်သတ်တွေအတွက်အောင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ.
ဒီနှစ် 2019 ရဲ့ပွဲတော်သီးသန့်တစ်ခုလေကြောင်းနှင့်အတူကြွလာ. သူတို့ထဲမှာအထင်ကရကခုန် supergroup ဆွီဒင်အိမ်မာဖီးယားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးရန်သာသူမြားဖွစျလိမျ့မညျ ဗြိတိန်နိုင်ငံ. သူတို့ကအစ Deadmau5 hosting နှင့် Cirez: D ပထမဦးဆုံးစွမ်းဆောင်မှုပါလိမ့်မည် & အာဒံကို Beyer.
အဆိုပါ join 70,000 စွဲငြိဖွယ်ရာသစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ခံစားရန်တိုင်းနွေရာသီပြန်လာကြောင်းလူတွေ, မော်ကွန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်, အလင်းပြပွဲ, နှင့် pirotechnics.
ဥရောပအကောင်းဆုံးပွဲတော်များ: Primavera အသံ 2019. ဘာစီလိုနာ, စပိန်
ကျနော်တို့အကြောင်းပြချက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ဤပွဲတော်မေတ္တာရှင်နေ. သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သူတို့အစွန်းရောက်ယခုလိုမက်ဆေ့ခ်ျများအပြင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကျော်, ကောလာဟလများအဘယ်အရာကို '' The New ပုံမှန်အကြောင်းကိုဝိုငျးခဲ့’ ဆိုလိုနိုင်. ထွက်ခွာသည် Primavera Facebook စာမျက်နှာ ကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကြည့်ဖို့.
ကျနော်တို့တကယ်သော်လည်းကိုချစ်ကဘာလဲ, အဆိုပါပွဲတော် lineup အပေါ်တန်းတူကျားကိုယ်စားပြုမှုအောင်မြင်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်း-ကျယ်ပြန့်အပေါင်ပေါ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ရွယ်ချက်ပြသခဲ့သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သူတို့ဟာ pleasingly လူ-un ကြီးစိုးသောပိုစတာထရာပူဇော်သက္ကာကိုနေကြပါတယ်. သို့သော်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအရေးကြီးတာက, ဒါကြောင့်မကြာသေးမှီကကြိမ်ကျော်ပါဝင်ထိုက်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သေပြကြပြီထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြုမူသောအမှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရောနှောဖြင့်လူနေထူထပ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, မသက်ဆိုင်ကျား၏, အမျိုးအစား, သို့မဟုတ်မျိုးဆက်.
အမှန်ကတော့အစဉ်အလာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုခေါင်းစီးသတင်းတစ်ရက်ပုံသေနည်း forgoing, အဆိုပါစီစဉ်သူများအခွက်တဆယ်တစ်စည်းစိမ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်ဥပဒေကြမ်း၏ထိပ်ထုပ်ပိုးကြ, ၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအပါအဝင် Erykah Badu, ယဉ် Impala, Solange, အနာဂတ်, Cardi B ကို, ပိုလ်, Janelle Mona, Robyn, မှာ, ခရစ္စနှင့် Queens, ဂျိမ်း Blake က, နှင့် mac အတွက် DeMarco.
ကျွန်းပွဲတော် 2019. ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ
Sziget တစ်ကျွန်းအပေါ်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲတော်များသည်နှင့်ဂီတနှင့်ပြည့်စုံသည်, ယဉျကြေးမှု, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, လွတ်လပ်မှုကို! အလုပ်! ကျွန်တော်ဘယ်မှာ sign up ကိုပါဘူး? လုယက်သည်, ၏ပထမဦးဆုံးသငျသညျကအသေးစိတ်အချို့သည် get ပါစေ.
ပထမဦးဆုံးအ Sziget ပွဲတော်ပြန်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 1993 သေးငယ်တဲ့စုရုံးသကဲ့သို့ကတည်းကဥရောပအကြီးမားဆုံးဂီတပွဲတော်များတစ်ဦးသို့ပြောင်းလဲထားသည်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့အထဲကအဲဒီမှာ Szitizens အကြီးမားဆုံးအမည်များအချို့ကိုယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားကြသည်, နှင့်ကျော်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ 1,000 တစ်လွှားပြသ 60 အဆင့်ဆင့်, အဘို့7ဖြောင့်ရက်ပေါင်း. မည်သူမဆို Rehydrate? 😝
သူတို့အနုပညာအပေါ်တင်သောအလေးချိန်သာမကတေးဂီတလည်းဖြစ်သည်. ဆပ်ကပ်အပါအဝင်နေရာများစွာရှိသည်, ပြဇာတ်ရုံ, ပြတိုက် လေးပုံတပုံ, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ. အဆိုတော်များနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူတို့ရဲ့အခွက်ဖော်ပြရန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာ. Szitizens နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်အနုပညာရှင်အဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုအမှတ်ရစရာများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လည်းရှိပါတယ် အနုပညာလက်ရာများ.
ကြောင်းလုံလောက်စွာအေးမြမကြီးဘူးဆိုရင်, သူတို့သည်လည်းနေ Eco-friendly! သူတို့ကထိုသတင်းစကားကိုတတ်နိုင်သမျှသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသည်.
ဥရောပကနေတဆင့်ဂီတကိုလိုက်နာနှင့်ဥရောပထဲမှာအကောင်းဆုံးပွဲတော်များကြည့်ဖို့မှုတ်သွင်း feeling? ထိုအခါ၏အကူအညီဖြင့်ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် တစ်ဦးကရထား Save !
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-festivals-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#Creamfields #Europemusicfestival #MusicFestival #နွေ ဦး #ကျွန်း europetravel ပွဲတော် longtrainjourneys ပါတီ trainjourney
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားဘဏ္ဍာရေး, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ဥရောပခရီးသွား